Weerar Qasaaro geestay oo lagu qaaday Masjid ay Soomaali ku dukanayeen oo kuyaala Zurich – Xeernews24
20. Dezember 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Wararka ka imaanaya Magaalada Zurich ee caasimada Wadanka Switzerland ayaa sheegaya in xalay nin hubeesan oo cunsuri ah uu weerar ku qaada Masjid ay ku cibaadeesanayeen dad Muslimiin ah oo Soomaali u badan.
Ninka Weerarka geestay ayaa la sheegay in uu masjidka gudaha u galay xili jameecada masjidka dukadeen salaada Maqrib waxa uuna rasaas ku furay jameecadii masjdkaasi ku sugneed oo u badnaa dad Soomaali ah.
Inta la xaqiijiyay sadex qof oo Soomaali ah ayaa ku dhaawacantay weerarkaasi, waxaana dadka dhaawaca qaba qaarkood la sheegayaa in ay xaaladooda ay liidato, waxaana lagu daweenayaa isbitala kuyaala magaalada Zurich .
Ciidamada booliiska ayaa si deg eg ah u gaadhay masjidka la weeraray, waxa ayna ciidamada halkaasi ka bilaabeen baadhitaano ay ku baadi goobayaan ninka weerarka geestay, waxaana warar soo baxaya sheegayaan in booliiska heleen meydka nin weerarkaasi looga shakisan yahay.
Qaar kamid ah Wadamada Yurub ayaa waxaa ka jira falal la xadhiidha naceybka muslimiinta iyo sidoo kale dadka muhaajiriinta, waxaana inta badan weeraro iyo naceyb kala kulmaan dadka muslimiinta ah kooxo cunuriyiin ah oo kunool wadamada Yurub.
Daawada siddi loo Dilay safiirkii Ruushka ee dalka Turkiga Gaadhi Xamuul ah oo laga leeyahay Dalka Poland ayaa dad shacab ah ku laayey...